अदालत र सरकारलाई प्रश्न- जनार्दन, कुलमान र लालबाबुलाई पक्राउ गर्ने आदेश कहिले ?
नवराज सिंखडा 'जिज्ञासु'
काठमाडौं, २५ पुस । भ्रष्टाचार बेतिथि अनि मेडिकल माफियातन्त्रको निरन्तर विरोध गर्दै आइरहेका डा. गोविन्द केसीलाई हिजो अदालतको आदेश बमोजिम सरकारले पक्राउ गर्यो भन्ने खबर एक कान दुई कान मैदान हुँदै सामाजिक संजालमा भाइरल भइरह्यो। बुझ्दै जाँदा थाहा भयो कि सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा अध्यायन संस्थान (आइओएम)को डिनमा डाक्टर शशी शर्मालाई हिजो पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएपछि डाक्टर केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा र उनले गरेका फैसलाको छानविनको माग गर्दै अनसन बसेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको रहेछ ।
भ्रष्टाचार र गलत प्रवृति अनि निर्णयविरुद्ध बोल्दा, आन्दोलन गर्दा किन गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरियो ? भ्रष्टाचार र मेडिकल माफियातन्त्रको विरोध गर्नु उनको अपराध हो ? यदि त्यो अपराध हो भने अब गोविन्द केसी मात्र होइन आम जनता त्यो अपराधको निम्ति तयार बन्नुपर्छ। हुन त नेपालको कानुन दैवले जानुन भन्ने उखानै छ,भ्रष्टाचारीहरु, दलालीहरु, घुसखोरहरुले उन्मुक्ति पाउने देशमा गोविन्द केसी, रवि लामिछाने, कुलमानहरु पक्राउ पर्नु स्वभाविक हो । किनकी उनीहरुले जनताको पक्षमा निरन्तर काम गर्छन् । जनताको पक्षमा काम गर्नेहरु उनीहरुको नजरमा अपराधी बन्ने गरेका छन् । त्यसैको एउटा उदाहरण गोविन्द केसीलाई पक्राउ आदेश अनि पक्राउ नै हो ।
देशमा भएका हजारौं भ्रष्टाचारको मुद्दाहरु, बलात्कारका मुद्दाहरु, हत्याका मुद्दाहरु, ठगी दलालीका मुद्दाहरुको फाइल बिसौ वर्षदेखि खोलिएका छैनन् तर गोविन्द केसीजस्ता जनपक्षीय व्यक्तिहरुको जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदा घन्टा भरमा मुद्दा पर्छ र घन्टाभरमा फैसला हुन्छ यस्तो छ मेरो देशको न्याय प्रणाली।
जनपक्षीय व्यक्ति गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरेर आफ्नो पुरुषार्थ देखाउने निकम्मा सरकार अनि अदालतका जनपक्षीय भन्दा धनपक्षीयहरुलाई आग्रह गर्दछु । गोविकन्द केसीमात्र होइन अब धुर्मुस सुन्तली, रवि लामिछाने, महावीर पुन, जनार्दन शर्मा, कुलमान घिसिङ, लालबाबु पन्डित, गगन थापाहरुलाई पनि पक्राउ पुर्जी जारी गर किनकी यिनीहरु जनताको पक्षमा निरन्तर काम गर्ने हस्तीहरु हुन् । भ्रष्टाचार,दलालीपन, ठगी, चाप्लुसी जस्ता प्रवृति भएकाहरुको लागि यिनीहरु अभिशाप भएर निस्केका छन् ।
धुर्मुस सुन्तलीहरु गरिब, दुखी र निमुखा जनताको बस्ती निर्माण गर्दै हिडिरहेछन् । भोकमरी र शितलहरबाट पीडित बनेकाहरुको निम्ति उनी भगवान बनेर निस्केका छन् । लुटेर खान पल्केकाहरुको नजरमा उनीहरु दोषी हुन् ।
डाक्टर केसी भ्रष्टाचारी र मेडिकल माफियाका विरुद्ध सदैव लडिरहेछन् । उनी यसै पक्राउ परिसके, लालबाबु पन्डितहरु जसले डिभी र पि आर होल्डरहरु जो देशको सरकारी तहको उच्च ओहदामा थिए, उनीहरु विरुद्ध कठोर संघर्ष गर्दै कि सरकारी जागिर छाड्नुपर्ने, कि डिभी पि आर त्याग्नुपर्ने बाध्यकारी नियम पास गराइछाडे । उनी पनि भ्रष्टाचारी, दलाली, तस्करीहरुको नजरमा अपराधी हुन् ।अदालतले स्टे अर्डर जारी गरी पक्राउ गरियोस् ।
अनि जनार्दन र कुलमानहरु जसले वर्षौंदेखि बिजुली बेचेर जनतालाई अँध्यारोमा राखेर आफ्नो घर बनाउने बिजुली चोर तथा विद्युतमाफियाहरुको निद हराम गराउँदै जनतालाई उज्यालो दिए । उनीहरु झन् महाअपराधी होलान् । तुरुन्त पक्राउ गरियोस् । गगन थापाहरु जो स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको बेतिथि, विसङ्गतीलाई हटाउने भन्दै निरन्तर लागिरहे र केही हदसम्म सफल भए । जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नेहरु उनीलाई पक्राउ गर्न मुद्दा हाल । अनि अदालत स्टे अर्डर देउ र पकाउ गर । रवि लामिछानेहरु सँधै सत्य र न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द पारिरहेछन् । देशदेखि विदेशसम्मका अन्याय अत्याचारकाविरुद्ध सदैव घोक्रो सुकाइरहेछन् । भ्रष्टाचार, ठगी, दलालीको विरुद्धमा सदैव बोलिरहेछन् । उनी झन् राम्रो हुने कुरै भएन । उनीविरुद्ध मुद्दा हालियोस् । पक्राउ पुर्जी जारी गरियोस् र जेल हालियोस् । महावीर पुनहरु जो नेपालमै आविस्कार केन्द्र खोल्नुपर्ने आवाजहरु उठाइरहेछन्, त्यसैको निम्ति संघर्ष गरिरहेछन् उनीलाइ पनि पक्राउ गरियोस् ।
जब यी र यस्ता जनप्रेमी मान्छेहरुलाई सत्ता र शक्तिको आडमा नियन्त्रणमा राख्न सक्यो, तब देश लुटेरा, शोषक, शासक, सामन्ती, दलाल, भ्रष्टाचारी र मानव तस्करहरुलाई हाइसन्चो हुन्छ। नत्र तिमीहरुलाई पानीमुनी गए पनि देशप्रेमी र जनताप्रेमीहरुले छाड्ने छैनन् । आफू र आफ्ना अपराध कमजोरीलाई ढाक्न जतिपनि गर्नुपर्नेछ गरिहाल । तर, याद राख एक दुई जनालाई सत्ता र शक्तिको आडमा नियन्त्रण गर्न खोज्दैमा तिमीहरुका गलत कर्तुतहरु लुक्ने छैनन् यो देशमा हजारौं गोविन्द केसीहरु, रविहरु, जनार्दनहरु, कुलमानहरु र लालबाबुहरु जन्मिएका छन्, जसले तिमीहरुको काला कर्तुतको पर्दाफास गर्नेछन् र जनताको अदालतमा उभ्याउनेछन् ।
नवराज सिंखडा 'जिज्ञासुु'close
हुक्काबारबाट पक्राउ परेका बालबालिका र मेरो देशको भविष्य